Serasera momba ny tetik'asa momba ny seranan-tsambo, seranan-tsambo sy rano. - Ellicott Dredges
Case Studies, Seranan-tsambo, seranan-tsambo sy lalan-drano
Ireo tompon'andraikitra dia mahita ny fanondranana ny Utica Harbour ho toy ny «Milestone of Revitalization»
Source: Dredging Today Nosoratan'i DAN MINER UTICA, NY (WKTV) - Tao anatin'ny roa taona dia hanomboka hahita trano fisakafoanana, fivarotana antsinjaranao ary mety hisy trano fandraisam-bahiny mipoitra ao amin'ny Utica Harbor. Ny fanodinana ny seranana dia nanomboka tamin'ny volana septambra ary tokony hitohy hatramin'ny taona vaovao. Saingy, ny Alakamisy ny tanànan'i Utica sy ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana dia nanolotra fanomezana Krismasy mialoha. "Vitan'izy ireo izany tamin'ny fotoana firaketana, ry vahoaka," hoy i Carmella Mantello, talen'ny Canal Corporation. “Tombanana ho efa-bolana teo ho eo izahay no ho maina. Tao anatin'ny roa volana latsaka no nanaovan'izy ireo izany. ” "Tsy mila fifanarahana manokana izany," hoy ny Assemblywoman ...
Tapitra ny dingana voalohany tamin'ny fantsakana lakandrano atsimo i Cape
Cape Coral, Florida Source: Cape Coral Daily Breeze Ny tanàna sy ny orinasa mpitrandraka dia nahavita ny dingana voalohany amin'ny drafitra maodely amin'ny fitantanana dredging manerana ny rafitry ny lakandrano ao an-tanàna. Michael Ilczyszyn, mpitantana orinasa ao an-tanàna, ary Jack Adams avy amin'ny Gator Dredging dia nanao famelabelaran-kevitra tamin'ny filan-kevitry ny tanàna nandritra ny atrikasa natao ny alatsinainy teo tao amin'ny lapan'ny tanàna momba ny drafitra hanakorontanana ny quadrant atsimo atsinanana. Ny fampisehoana iray manontolo, pejy 179 rehetra, dia azo jerena amin'ny Internet. Adams sy Ilczyszyn no nanasongadina ny filankevitra. Ny quadrant atsimo atsinanana, misy lakandrano 349 amin'ny 115 miles, dia atsimon'ny Hancock Bridge Parkway sy atsinanan'ny ...
MOSES LAKE - Mponina sy olo-manan-kaja 50 eo ho eo ao amin'ny Lake Lake no nandeha nizotra tamina hantsana mitrandraka fahata no nopotsirina avy amin'ny fanambanin'ny farihy ho ao anaty dobo mitazona. Sodina lehibe iray nivelatra avy teo amin'ny farihy mankamin'ny farihy iray, nanary rano. Niova ho mazava sy maizina ny lokon'ny rano, nanomboka naka sary ny mpijery sasany handraketana ny fomba fiasan'ny teknolojia. Asa fanadiovana y, fampiasana ny Ellicott Dragon Dredge 370, amin'ny fomba ofisialy nanomboka ny 1 Jolay, 2011 voalohany tao Mosesy Lake mba hanatsara ny kalitaon'ny rano. Ny Distrikan'i Irrigigation sy Rehabilitation an'ny Lake Lake dia nanasa ny besinimaro tamin'ny fihetsiketsehana Alatsinainy mba hianatra bebe kokoa momba ilay tetikasa. Mary ...
Loharano: Ellicott® Iraisam-pirenena Tamin'ny volana Aprily 1984, ny SAS Trapnell, Ellicott® Brand Series 370 dredge, dia natomboka tao amin'ny Dobo Noxontown akaikin'i Middletown. Ankehitriny amin'ny taona fahatelo ambin'ny folon'ny asa fanompoana, io làlam-panoherana io dia nanolotra fomba hamerenana sy hanomezana fikojakojana ny dobo sy ny rano hafa any amin'ireo kaominin'i New Castle sy Kent. Ny taon-dasa dia tena sahirana be ho an'ny SAS Trapnell sy ireo ekipany. Ny tetikasa tao Moores Lake dia vita taorian'ny fanodinana azy ireo mahery noho ny 75,000 metatra toradroa. Ny fanodinana dia natao tamin'ny fomba mora tohina ny filàn'ny ...
Ny mpikatroka an-keriny any Florida sy ny mpifanaraka an-dranomasina Piedroba Marine Construction (PMC) dia nanambara androany ny fahombiazan'ny ampahany amin'ny Manatee Pocket Dredging Project. Ny PMC dia nalain'i Dickerson avy any Florida tamin'ny fiandohan'ity taona ity mba hanadinadinana ireo tributaries maromaro manodidina ny fantsona lehibe. PMC's 2009 8 ″ marika elicott® manamboatra tohatra tohotra Ellicott® dia nampiasaina hanakofana lakandrano tery tery 20 metatra ny sakany. Ireo fitaovana dredged dia nafindra tamin'ny alàlan'ny tobim-booster roa izay mihoatra ny halaviran'ny 14,000 metatra. Ny CEO sy talen'ny PMC, Dr. Prieto-Portar dia tena faly tamin'ny fahombiazan'ny asa ary nidera ny fiarahan'ny ekipa roa tonta: "...
Etazonia: Mpanafika Corps an'ny Tafika mba Hamitana ny Long Island Intracoastal Waterway amin'ny fandatsahana eo akaikin'ny Moriches Bay Reach
Source: Dredging Today Corps of Engineers an'ny tafika amerikana, Distrikan'i New York, ny mpifanaraka dia nanomboka ny dingana faharoa amin'ny fikolokoloana fikojakojana any Moriches Bay tonga amin'ny fantsona federaly Long Island Intracoastal Waterway tamin'ity herinandro ity. Paul Howard Construction, avy any Greensboro, NC, dia nahazo fifanarahana $ 1.45 tapitrisa $ hanatanterahana ny asa fitrandrahana fikojakojana any amin'ny faritry Moriches Bay ao amin'ny fantsom-pahalalana 6 metatra. Mba hizahana ireo harena an-dranomasina mora tohina, ity tetikasa ity dia nizara ho dingana roa miaraka amin'ny fanentanana roa samihafa. Ny dingana voalohany, izay nifantoka tamin'ny faritra tao amin'ny faritra Moriches Bay niaraka tamin'ny kiaka mafy indrindra, dia vita talohan'izay ...
St. Sebastian (Florida) Muck Dredging Nandritra ny fampiasana Ellicott® marika Series 970
Loharano: Ed Bierschenk / TCPalm.com SEBASTIAN, Florida - Rehefa nirohondrohona i George Koraly noho ny onjampeo nandritra ny taona maro nanesorana ny bibikely tao amin'ny reniranon'i St. Sebastian dia nanandrana nanodina ny sain'ny hafa izy inoana mendrika fankasitrahana. Crewman of SubAqueous Services, Inc. of Orlando dia nanomana dredge tao amin'ny Canal C-54 ao amin'ny làlan'ny Indian River-Brevard County any avaratry Sebastian ho fiomanana amin'ny tetikasa dredging hanesorana moka sahabo ho 1.8 tapitrisa cu yds tao anatin'ny taona vitsivitsy. avy amin'ny renirano St. Sebastian ao amin'ny County Indiana River. (Ny dredge ...
Ellicott® famantarana famantarana famantarana any Vietnam ho an'ny Dredgers 2. Tsy maintsy hiady amin'ny fifanarahana any Vietnam ny orinasa amerikana
4 Desambra 2000 Loharano: ENR avy amin'i Sherie Winston Na dia nanao sonia fifanarahana aza ny orinasam-pananganana amerikana roa nandritra ny dian'ny filoha Clinton tany Vietnam tamin'ny 17-20 novambra, tsy antenaina hisokatra ireo firaketan-drano ho an'ny orinasa amerikana vaovao. Orinasa efa nanao orinasa angamba dia mety misy ireo manana tongotra ambony. "Mba hahombiazanao any Vietnam dia mila faharetana be ianao, fanohanana mavitrika avy amin'ny governemantao, solontenan'ny vietnamiana izay samy mahatakatra ny fomba andrefana sy ny eo an-toerana ny fanaovana raharaha ary ny vintana kely ihany," hoy ny Representative International an'ny Ellicott®. Ellicott® International dia namolavola sy nanamboatra dredges nandritra ny 100 taona mahery sy ...
TRANO DREDGING SY NY REFONY BARRIER REEF Ny fifanarahana dia mamita ny asa tany amin'ny seranan-tsambo vaovao mifanila amin'ny Great Barrier Reef any Aostralia
Loharano: Mpitrandraka fampitrandrahana harena ankibon'ny tany sy fanorenan-tany eran-tany Aostralianina, Hall Contracting Pty Ltd dia nahavita dredging tany amin'ny Mackay Small Craft Harbour any amin'ny morontsiraka afovoan'i Queensland. Ny seranan-tsambo vaovao, izay ahitàna zaridaina 590 berta mandray sambo mpizahatany izay manompo ny Great Barrier Reef, dia namboarina mifanila amin'ny seranan-tsiranoka misy siramamy sy siramamy ao Mackay. Ny fananganana ny presintan'ny seranan-tsambo vaovao dia misy: fananganana rano mamaky rano 1,300 m, izay notanterahin'i John Holland Construction. Fitrandrahana fasika matevina 600,000 3 m4.5 ka hatramin'ny halalin'ny RL-XNUMX m Tide astronomika ambany indrindra, ...